Ginger tii maka ọnwụ na-efu - contraindications
Mma Kwụsie ike site na iwu
Ọtụtụ ndị inyom dị njikere ịga ihe ọ bụla, naanị iji nweta ihe dị oke ọnụ na-atụfu ego ndị ahụ. Otu n'ime ihe ndị a na-ewu ewu maka ịnwụ ibu bụ ginger tii ma ọ bụ decoction. Mana, dị ka amamihe oge ochie na-ekwu, "ihe niile dị mma n'edebeghị ihe." Ya mere site n 'uba n' uzo di gi mkpa ka i kpachara anya ma ghara igbochi ya, karie ma oburu na aru gi adighi nma.
Ndabere nke ginger slimming na uru bara uru nke ginger
N'ime obi nri, ebe ebe isi na-adị arọ bụ ginger tii, ịgha ụgha ọtụtụ ihe bara uru nke mgbọrọgwụ nke ginger, nke ndị na-agwọ ọrịa Chinese chọpụtara ihe karịrị puku afọ atọ gara aga ma kọwaa ya na Ayurveda. Njirimara ndị a na-agụnye eziokwu ahụ na ginger na-eme ka ọkpụkpụ ọbara na metabolism accelerate. Ọ na-egbochi ịchọta cholesterol na abụba n'ime ahụ. Ọzọkwa, o nwere vitamin A, C, B vitamin na amino acid niile dị mkpa maka ahụ (tryptophan, phenylanine, valine, threonine, methionine, wdg).
Ekwesiri iburu n'uche na ginger na-eme ka o wepuo nsi na ahuhu, na-enye ogwu ohuru na mmetuta di iche iche nke aru. N'ihi ya, anyị na-enweta nghazi zuru oke nke metabolism maka nnyefe na ntinye nke vitamin na nri ndị dị mkpa, nakwa, na mgbakwunye, mmetụta ntinye.
Enwere ọtụtụ ntụziaka maka ginger tii maka ọnwụ na-efu, malite site na ịmepụta mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nke ginger ma na-agwụ site na ntụziaka dị aghụghọ na gbakwunyere wayo / lemon, mmanụ aṅụ, pawuda na ihe oriri ndị ọzọ. Ma, na-eji ntụziaka maka nri ginger maka ọnwụ, ị kwesịrị icheta ihe ndị dị na contraindications.
Mgbọrọgwụ nke ginger maka ọnwụ ọnwụ - contraindications
N'ime ndị na-eri ihe na ndị dọkịta nwere echiche na-emegide onwe ha banyere uru nke ginger. Na mgbakwunye na njirimara ndị bara uru, e nwere ọtụtụ ịdọ aka ná ntị siri ike. Tupu ị na-eburu ibu site n'enyemaka nke ginger, gụọ akwụkwọ mkpesa.
Ihe ndị na-emekarị ka ndị mmadụ na-eme ihe dị mma bụ:
ịrịa ọrịa shuga, iji ginger eme ka ọnụ ọgụgụ shuga dị n'ọbara, nke mere na ndị ọrịa mamịrị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-ekpebi iri nri ginger kwa ụbọchị (ma ọ bụghị nke a, ọ bụghị mgbe niile ka ọgwụ na-agwọ ọrịa shuga);
ọrịa obi, n'ọtụtụ dị ukwuu nke ginger nwere ike imetụta ọrụ nke obi, na ọrịa ndị gbasara ọrịa obi, mee ka ọnọdụ ahụ ka njọ;
afọ ime na ịkụ azụ , na-ezere ginger tii na ihe ọṅụṅụ kwesịrị ịbụ mgbe ị dị ime, karịsịa na nkera nke abụọ, nakwa n'oge ị na-ara nwa, n'ihi na nke a nwere ike imebi nwa ahụ;
ọbara ọgbụgba ọ bụla na ọchịchọ nke ịmịnye ọbara bụ nkwenye siri ike;
cholelithiasis - a gaghị atụ aro ka ị rie ginger ma ọ bụrụ na ị nwere nkume na gallbladder ma ọ bụ bile ducts, n'ihi na nke a nwere ike ime ka ọkpụkpụ nkume na-agagharị na biliary tract ma mee ka ọ dị mkpa maka ịwa ahụ;
Akpụkpọ anụ, mgbakasị, allergies na diathesis
na-ezo aka na mkpesa iji eji nnukwu ihe ginger;
Ọzọkwa, a gaghị atụ aro ka ị ṅụọ kinger tii tupu ị lakpuo ụra, n'ihi na ginger bụ ihe dị ike na-akpali ma nwee ike ime ka ehighị ụra.
Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọ bụla n'ime ọgwụ ndị ahụ, ma ị ka kpebisiri ike kpebisie ike ibu ọnụ site n'enyemaka nke ginger, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, gwa dọkịta gị, ebe ọ bụ na ginger anaghị ejikọta ya na ọgwụ na ọgwụ ụfọdụ, ọbụna dịka paracetamol . Otú ọ dị, ịghara ịdị arọ dị ukwuu, ma ahụ ike ka ọnụ ọnụ!
Chromium picolinate maka ọnwụ ọnwụ
Nkume ọka maka ọnwụ
Ugboro calorie ole ka eji nọrọ jụụ?
Mkpebi na ekpere maka ịdị arọ
Mmega ahụ maka ihu ọnwụ
Kedu ka esi atụfu ibu?
Kedu esi agbaba abụba subcutaneous?
Nkochi maka uru bara uru
Kedu mkpuru osisi maka nhalata ihe ndị kachasị dị irè?
Gymnastics respiratory Strelnikova - uru na nsogbu
Kedu ka esi esi na afo?
Igbe nke ndị na-ese ihe na enyo n'ime ime ụlọ
Slipper akpụkpọ ụkwụ
Leuzea - ​​mmiri wepụ
Kedu otu ị ga-esi eji akwa akwa maka oyi?
Egypt - oge site na ọnwa
Akpụkpọ ụkwụ nke Menon na mkpuchi
Cervicitis - ọgwụgwọ
Cabbage salad na mmanya
Kedu esi akpọ nwa nkita?
Achịcha Kasị Mkpụrụ Chocolate
Khachapuri na ụdị imeretian
Esemokwu alụmdi na nwunye
Cirrhosis nke ogo 4 - ole mmadụ ole na ole?
Mkpụrụ apụl na pawuda
"Ire Teshchin" si na aubergine maka oge oyi - ihe dị iche iche na-atọ ụtọ maka nri nri "na ncha"
Ime afọ mgbe mwepụsịrị mmanya